Ny FAA dia nametraka faritra tsy misy sidina eo ambonin'ny tetezan'i Texas, tototry ny mpifindra monina tsy ara-dalàna 10,500 XNUMX
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Ny FAA dia nametraka faritra tsy misy sidina eo ambonin'ny tetezan'i Texas, tototry ny mpifindra monina tsy ara-dalàna 10,500 XNUMX
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovaom-panjakana • Zon'olombelona • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Vahoaka mpifindra monina tsy ara-dalàna marobe no tafangona tao ambanin'ny tetezana tato anatin'ny andro vitsivitsy, ka ny ben'ny tanànan'i Del Rio Bruno Lozano dia nametraka ny tarehimarika 10,500 XNUMX mahery hatramin'ny alakamisy alina, ary niantso ny filoha Joe Biden ihany koa hamaly ny “krizy mitohy” ao amin'ny sisintanin'i Texas tanàna.
FAA dia nanangana faritra tsy misy fiaramanidina maharitra roa herinandro ho an'ny drôna eo ambonin'ny Bridge Del Rio Bridge any atsimon'i Texas.
Mpifindra monina tsy ara-dalàna maherin'ny 10,000 no nivory tao ambanin'ny Tetezana Del Rio any Texas tato anatin'ny andro vitsivitsy.
Ny faritra tsy misy fiaramanidina FAA dia napetraka noho ny fangatahan'ny US Border Patrol izay nilaza fa manelingelina ny sidina mpampihatra lalàna ny drôna.
Ny US Federal Aviation Administration (FAA) dia namoaka fanambaràna nanambara faritra tsy misy fiaramanidina mandritra ny 14 andro ho an'ny rafitra fiaramanidina tsy mitolona (UAS) ambonin'ny Del Rio Bridge amin'ny sisintany US-Mexico, atsimon'i Texas.
Manonona "antony manokana fiarovana" ny faa dia nandrara ny drôna tsy hisidina Tetezana Del Rio izay fivorian'ny mpifindra monina tsy ara-dalàna mihoatra ny 10,000 no niangona, nanakana ny haino aman-jery ao an-toerana tsy haka sary an'habakabaka amin'ilay tranonkala.
The faa Ny fandrarana drone dia notaterin'ny mpiara-miasa Fox News eo an-toerana, izay naka sary an-habakabaka mahatalanjona mampiseho ireo mpifindra monina marobe tafiditra ao ambanin'ny tetezana. Tamin'ny fotoana nielezan'ny horonantsary ny alakamisy maraina, dia tombanana ho olona 8,200 2,000 no tonga teny an-toerana, na dia nilaza aza ny ben'ny tanàna fa nitombo XNUMX teo ho eo ny vahoaka tao anatin'ny ora vitsivitsy taorian'izay. Betsaka amin'ireo mpifindra monina no voalaza fa Haisiana.
Raha ny fampandrenesana voalohany nataon'ny FAA ihany no niresaka momba ny “filaminana” manjavozavo, nisy ny fanambarana voaray tamin'ny haino aman-jery fa ny faritra tsy misy fiaramanidina dia napetraka noho ny fangatahan'ny US Border Patrol, izay nilaza fa “manelingelina ny sidina mpampihatra lalàna eo amin'ny sisintany ny drôna. ” Nanampy anefa ity masoivoho ity fa ny haino aman-jery dia mety afaka mangataka fanavotana mba hanohizana ny fandidiana drôna manerana ilay faritra.
Governoran'i Texas Greg Abbott dia nikendry an'i Biden ihany koa noho ny olan'ny sisintany, tamin'ny filazany fa “nampihoron-koditra” ny valintenin'ny fitondrana ary iray amin'ny “tsy fitandremana”. Ny alakamisy teo dia nandidy ny manampahefana tao an-toerana ny governora mba hanidy ny fidirana enina manaraka ny sisin-tany atsimo “hampijanonana ireo mpivaro-tena ireo [mpifindra-monina] tsy hisongona ny fanjakanay.”
Del Rio dia iray amin'ireo telo am-polony fiampitana manaraka ny sisintanin'i Texas-Mexico. Ireo mpifindra monina tonga amin'ireo fiampitana ireo dia afaka mangataka fialokalofana na manolotra ny tenany any amin'ny Border Patrol mba hosamborina ary avy eo navotsotra tany Etazonia, miaraka amin'ny politikan'i Obama 'tratra sy manafaka' naverin'ny filoha Biden tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Biden koa dia nanandrana nanala ny politikan'ny 'Mijanona any Mexico' an'ny filoha teo aloha Donald Trump, izay nanery ny sasany mpitady fialokalofana hiandry ny fizotran'ny fifindra-monina ivelan'i Etazonia, na dia nivadika ny hetsika aza ny Fitsarana Tampony, ary nilaza fa tsy manaraka ny dingana tokony hatao i Biden atsaharo ny fampiharana.